पृथ्वीभन्दा तीन गुणा ठूलो ‘सुपर अर्थ’ भेटियाे (भिडियोसहित) - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /बिज्ञान प्रबिधि/पृथ्वीभन्दा तीन गुणा ठूलो ‘सुपर अर्थ’ भेटियाे (भिडियोसहित)
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरुले पृथ्वीभन्दा तीन गुणा ठूलो ‘सुपर अर्थ’ नामको ग्रह पत्ता लगाएका छन् । २० वर्षको सुक्ष्म अध्ययन, सात सय ७१ पटकको परीक्षण र सातवटा अत्याधुनिक उपकरणहरुको सहयोगबाट पत्ता लागेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।
सुर्यबाट नजिकको तारा बनार्ड परिक्रमा गर्ने उक्त ग्रह ६ प्रकाश वर्ष टाढा रहेको वैज्ञानिकहरुको दाबी रहेको छ । यो ग्रहको सतहको तापक्रम सौर्यमण्डमा रहेको ग्रह शनिभन्दा चिसो रहेको वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेका छन् । अनुमानित तापक्रम माइनस दुई सय ७४ फरेनहाइट रहेकोे छ । यसको सतहमा बरफको मरुभुमि रहेको र तरल पानी नरहेको वैज्ञानिकहरुले विश्वास गरेका छन् ।
टेलिस्कोपबाट हेर्दा अन्तरिक्षमा यो ग्रह अरु तारा भन्दा छिटो हिँडेको देखिन्छ किनकी यो सुर्यभन्दा अधिक गतिमा हिँड्छ । यो ग्रह बनार्ड स्टारलाई परिक्रमा गर्ने परिधि र बुधले सुर्यलाई परिक्रमा गर्ने परिधि समान रहेको दाबी गरिएको छ, जुन दुई सय ३३ दिन हुन जान्छ ।
बाबाले छोडे पछि प्यारालाइज आमा र बहिनि पाल्न सेक्युरिटी गार्ड गर्दै बहादुर छोरी !
नेपाललाई उछिन्ने दाउमा भारत, कसले जित्ला मीस वर्ल्ड ?
हाम्रै देशको एशियाकै लामो र अग्लो झोलुङ्गे पुल !! शेयर गरौ!!!
यसरी घरमै बनाउनुहोस् एकै छिनमा मकै छोडाउने मेसिन